Nhau - Kusarudza Kuti Reusable Yekutakura Packaging ndiyo Yakakodzera Fit Kambani YAKO NA RICK LEBLANC
Kusarudza Kana Reusable Yekutakura Kuteedzera ndiyo Yakakodzera Yakakodzera Kambani YAKO NA RICK LEBLANC
Iyi inyaya yechitatu uye yekupedzisira chinyorwa muzvikamu zvitatu-zvakateedzana. Chinyorwa chekutanga chakatsanangura kugadziriswazve kwekutakura zvekutakurisa uye nebasa rayo muketani, chinyorwa chechipiri chakatsanangura zvakanakira zvehupfumi nezvezvakatipoteredza zvekugadzirisa kutakurwa kwekutakura, uye chinyorwa chekupedzisira ichi chinopa mamwe ma parameter uye maturusi kubatsira vaverengi kuona kana zvichibatsira kuchinja zvese kana imwe yekambani imwe-nguva kana kushomeka-kushandisa kutakura kurongedza kune inogadziriswazve yekutakura yekupakata system.
Paunenge uchifunga nezvekushandisa zvakare inogona kutakurwa yekutakura system, masangano anofanirwa kutora maonero akazara eese ehupfumi uye ezvakatipoteredza masisitimu emari kuyera iyo inogona kuitika yakazara kukanganisa. Muchikamu chekuderedza mari yekushandisa, pane nzvimbo dzinoverengeka umo mari yekuchengetedza inoita chinzvimbo chakakosha pakuongorora kana kusashandisazve isarudzo inokwezva. Izvi zvinosanganisira kuenzanisa zvinhu zvekuenzanisa (kushandiswa kamwechete maringe nekushandisa kwakawanda), kuchengetedza vashandi, kuchengetedza kwekufambisa, nyaya dzekukuvara kwechigadzirwa, nyaya dzekuchengetedza ergonomic / yevashandi uye dzimwe nzvimbo diki dzekuchengetedza.
Muzhinji, zvinhu zvinoverengeka zvinoona kana zvichizobatsira kushandura zvese kana imwe yekambani imwe-nguva kana kushomeka-kushandisa zvekutakura zvekutakurisa kune zvinoshandiswazve zvekutakura zvekurongedza system, kusanganisira:
Yakavharwa-kana yakachengetedzwa yakavhurika-loop kutumira system: Kana kongiri yekutakurisa zvakare yatumirwa kunzvimbo yayo yekupedzisira uye zvirimo zvabviswa, izvo zvisina chinhu zvekutakura zvinhu zvinounganidzwa, zvakaiswa, uye zvodzoserwa pasina yakawanda nguva uye mutengo. Reverse logistics - kana rwendo rwekudzoka rwezvisina chinhu zvekutakura zvinhu - zvinofanirwa kudzokororwa mune yakavharwa-kana inochengetedzwa yakavhurika-loop kutumira system.
Kuyerera kwezvigadzirwa zvinoenderana mumazana makuru: Reusable yekufambisa yekurongedza system iri nyore kururamisa, kuchengetedza, uye kumhanya kana paine kuyerera kwezvinoenderana zvigadzirwa mumahombe mavhoriyamu. Kana zvigadzirwa zvishoma zvikatumirwa, mari inogona kuchengetwa yekutakurisa zvekutakurisa inogona kudzoserwa nenguva uye nemubhadharo wekutevera zvisina chinhu zvekutakura zvinhu uye kudzoreredza zvinhu. Kuchinja kukuru kwekutumira frequency kana mhando dzezvigadzirwa zvinotumirwa zvinogona kuita kuti zvive zvakaoma kuronga nenzira kwayo nhamba chaiyo, saizi, uye mhando yezvinhu zvekutakura zvekutakura.
Makuru kana zvigadzirwa zvakakura kana izvo zvinokuvara zviri nyore: Ava vakwikwidzi vakanaka vekutakurisa zvekufambisa zvekutakurisa. Zvigadzirwa zvakakura zvinoda zvakakura, zvinodhura kamwe-nguva kana mashoma-ekushandisa midziyo, saka mukana wekugara-kwenguva yakareba mutengo wekutenderera nekuchinjisa kune unoshandiswazve kutakura kurongedza kwakakura.
Vatengesi kana vatengi vakaunganidzwa padhuze neumwe: Izvi zvinogadzira vangangoda kukwikwidza zvekutakurisa zvekutakura zvakapetwa mutengo wekuchengetedza. Iko kugona kwekumisikidza "mukaka unomhanya" (diki, nzira dzezuva nezuva dzemarori) uye nzvimbo dzekubatanidza (kurodha zviteshi zvinoshandiswa kugadzirisa, kuchenesa, uye danho reusable kutakura zvinhu zvekutakura) zvinogadzira mikana yakakosha yekuchengetedza-mari.
Inbound mitoro inogona kutorwa uye yakasimbiswa kuendesa pane yakajairwa ingori-mu-nguva hwaro.
Uye zvakare, kune mamwe madhivhiri akakosha anozvikweretesa kumatanho epamusoro ekushandisa zvakare kugamuchirwa, kusanganisira:
Mazhinji emarara akasimba
Kugara uchidzikira kana kukuvara kwechigadzirwa
· Inodhura inoshandiswa kurongedza kana kudzokororazve-kushandisa kavha mari
· Inoshandiswa zvisina kukwana nzvimbo yetrailer mukutakura
· Isina kukwana kuchengetedza / nzvimbo yekuchengetera
· Kuchengetedzeka kwevashandi kana nyaya dze ergonomic
· Kukosha kwehutsanana
· Kudiwa kwekubatanidzwa
· Nzendo zhinji
Kazhinji, kambani inofanirwa kufunga nezvekuchinjira kune inotakurika yekufambisa yekupakata painenge ichidhura pane imwe-nguva kana kushomeka-kushandisa kutakura kurongedza, uye kana iri kuyedza kuzadzikisa zvinangwa zvakamisikidzwa kusangano ravo. Aya matanho matanhatu anotevera anobatsira makambani kuona kana mashandisirwo ekufambisa ekupakata anogona kuwedzera purofiti kune yavo yepazasi mutsetse.
1. Ziva zvinogona kugadzirwa
Gadzira runyorwa rwezvigadzirwa zvinowanzoendeswa muhukuru hukuru uye / kana izvo zvinowirirana murudzi, saizi, chimiro uye huremu.
2. Fungidzira imwe-yenguva uye yakaganhurirwa-shandisa kurongedza mutengo
Fungidzira zvazvino mitengo yekushandisa imwe-nguva uye mashoma-shandisa pallets nemabhokisi. Sanganisira mutengo wekutenga, kuchengetedza, kubata uye kurasa kurongedza uye nekuwedzera mari yechero ergonomic uye yevashandi kuchengetedzeka.
3. Gadzira mushumo wenzvimbo
Gadzira mushumo wenzvimbo nekutsvaga nzvimbo dzekutumira uye dzekuendesa. Wongorora mashandisirwo ezuva nezuva uye evhiki "emukaka anomhanya" uye nzvimbo dzekubatanidza (kurodha mateki anoshandiswa kurongedza, kuchenesa uye danho reusable zvigadzirwa zvekupakata). Uyezve funga nezvechaingeti; zvingave zvichikwanisika kufambisa danho rekushandiswazve nevatengesi
4. Wongorora zvishandiswezve zvekutakura zvekutakurisa sarudzo uye mutengo
Wongorora mhando dzakasiyana-siyana dzezvekutakurisa zvekufambisa zvekurongedza zviripo uye nemitengo yekuzvifambisa kuburikidza necheni yekutengesa. Wongorora mutengo uye nehurefu hwehupenyu (huwandu hwekushandisa zvakare macircuit) ezve zvinoshandiswa kushandura zvekutakura zvinhu.
5. Fungidzira mutengo wekudzosera zvinhu
Zvichienderana nekutakura uye kuendesa mapoinzi akaonekwa mushumo wenzvimbo wakagadzirwa muChitatu 3, fungidzira mutengo wekudzosera zvinhu mune yakavharwa-loop kana yakashama yakavhurika-loop kutumira system.
Kana kambani ikasarudza kusazvipira yayo zviwanikwa kugadzirisa manejimendi zvigadzirwa, inogona kuwana rubatsiro rwechitatu-bato yekudyara manejimendi kambani kubata zvese kana chikamu cheiyo reverse logistics maitiro.
6. Gadzira yekutanga mari yekuenzanisa
Zvichienderana neruzivo rwakaunganidzwa mumatanho apfuura, gadzira yekutanga mari yekuenzanisa pakati penguva imwechete kana kushomeka-kushandisa uye kugadziriswazve kutakura kurongedza. Izvi zvinosanganisira kuenzanisa izvo zvazvino mutengo wakatarwa muDanho rechipiri kusvika kuhuwandu hweanotevera:
- Mutengo weiyo huwandu uye mhando yezvinhu zvinoshandiswazve kutakura zvekurongedza zvakaongororwa muDanho 4
- Mari inofungidzirwa yekudzosera zvinhu kubva kuChitatu 5.
Pamusoro peichi chisingakanganisike kuchengetedza, kurongedza kunoshandiswazve kwave kuchiratidzwa kudzikisa mutengo nedzimwe nzira, kusanganisira kudzikisira kukuvara kwechigadzirwa kunokonzerwa nemidziyo isina kukodzera, kudzikisa mutengo wevashandi nekukuvara, kudzikisa nzvimbo inodiwa pakuverenga, uye kuwedzera kugadzirwa.
Kunyangwe vatyairi vako vari vehupfumi kana vezvakatipoteredza, pane mukana wakasimba wekuti kusanganisa kurongedza zvakare mune yako yekuchaina keteni kunobatsira pane yako yepasi mutsetse pamwe nharaunda.